Alarm နာရီကျွန်ုပ်အတွက်အခမဲ့ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ငါ့အဘို့နှိုးစက်နာရီအခမဲ့
ငါ့အဘို့နှိုးစက်နာရီအခမဲ့ သင်၏ Android ဖုန်းကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်သည် နှိုးစကျနာရီ သင်၏အကြိုက်ဆုံးတေးသံများ၊ အိပ်ရာနာရီ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ themes များနှင့်အတူ လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် အိပ်စက်таймер ညအချိန်တွင်သင့်အားအိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်! Alarm Features:
• နှိုးစက်နာရီ: အပန်းဖြေသီချင်းများသို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောဂီတကိုနှိုးပါ
• အကန့်အသတ်မရှိအချက်ပေးမှုပံ့ပိုးမှု: ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး၊
• နောက်ခံအချက်ပြအထောက်အပံ့ အက်ပလီကေးရှင်းကိုအလုပ်မလုပ်ရင်တောင်နှိုးမည်
• မရပ်မနားနှိုးစက်: သငျသညျကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်မှေးမှသည်အထိဂီတဆက်ပြောသည်။
• Sleep Timer: အနားယူနေသောတီးလုံးများသို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဆူညံသံများသို့အိပ်ပျော်သွားသည်
• ညဘက်အနေအထား သင့်ကိရိယာကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘေးဘက်နာရီအဖြစ်ပြောင်းပါ
• ဒီဇိုင်နာနာရီ:2စတိုင်နာရီမျက်နှာများကိုခံစားကြည့်ပါ
• လှပသောနာရီဝစ်ဂျက်များ: သင်၏ Home Screen တွင်အချိန်ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ
• ရာသီဥတုအခြေအနေ တိုက်ရိုက်ဒေသခံအခြေအနေများနှင့်အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ
• Brightness Slider: ကောင်းမွန်သောညအိပ်စက်ပြီးနောက်သင့်အားမမြင်နိုင်စေရန်မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုပြောင်းလဲပါ
• ပါဝင်သည့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှောင်ထုထဲတွင်လှည့်စားနေပါ
• အော်တိုပစ်လွှတ်မှု: ကိရိယာဆိပ်ခံသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မိသောအခါ application ကိုအလိုအလျောက်စတင်နိုင်သည်
• ပုံတူနှင့်ရှုခင်းပုံစံများ: နာရီနှစ် ဦး စလုံးတိမ်းညွတ်အတွက်perfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်
• အဓိကမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖြတ်လမ်းများ - အိပ်စက်ခြင်း timer နှင့်နှိုးစက်များလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ပါ
ပြီးပြည့်စုံသောလှပသောဟန်ချက်ညီမှုကို Alarm Clock နှင့်ခံစားကြည့်ပါ။
အဘယ်ကြောင့် app ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းသနည်း?
ကင်မရာ ခွင့်ပြုချက်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကို LED ကင်မရာအလင်းကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
LOCATION သို့ တသမတ်တည်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်
သငျသညျဒီ app ၏ installation နဲ့ဖြန့်ချိလျက်ရှိသောမည်သည့် updates များကိုသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်သဘောတူဒီ app ကို install လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဒီ app (မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ မည်သည့်အပ်ဒိတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်) (ဈ) သင့်ရဲ့ device ကိုအလိုအလျှောက်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမကယ်မလွှတ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာနှင့်ထိရောက်သောစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများနှင့်ဆက်သွယ်စေ, (ii) app- ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါနားလည်ပြီးသဘောတူ related ဦးစားပေးသို့မဟုတ် data ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုသိမ်းဆည်းထားနှင့် (iii) အထက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအထဲက set အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ features တွေပေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းပါ။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်က app ကို uninstall လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ အကူအညီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ယူနစ် 1, Digiweb အဆောက်အအုံ
Blanchardstown မြောက်ပိုင်းလမ်း, Dublin 15 အိုင်ယာလန်
“ Alarm Clock for Me” - ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှိုးစက်နာရီအက်ပလီကေးရှင်းသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များအားလုံးသည်သင်၏ကျန်းမာသောအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကာလများအတွက်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုဖော်ပြသောအတူတူယုံကြည်စိတ်ချရသောနှိုးစက်နာရီအက်ပလီကေးရှင်းသစ်အမည် -
* သင်မေးခဲ့ဖူးသည် - ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်သည်၊ ယခုတွင်သင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအချိန်သတ်မှတ်ထားသောအလုပ်များကိုခြေရာခံရန်အတွက်အချက်ပြတွင် built-in Timer တပ်ဆင်ထားသည်
သင်၏ပြည့်စုံသောမနက်ခင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သင်၏နောက်နှိုးစက်ကိုအလင်းရောင်အိပ်စက်ချိန်အဆင့်တွင်နိုးထစေပြီးကောင်းမွန်သောစိတ်ထားဖြင့်နေ့သစ်ကိုစတင်ရန်“ Gentle PreAlarm” ကိုဖွင့်ပါ။
ဒီဇင်ဘာ 15, 2016